အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ Video Conference အထူးအစည်းအဝေးအား ကျင်းပခြင်း – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၂၉) ရက်
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ Video Conference အထူးအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့ နံနက် ၈:၃၀ နာရီမှ ၁၀:၃၀နာရီ အထိ Video Conferencing ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အင်ဒို နီးရှားနိုင်ငံမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခုအထူးအစည်းအဝေးသည် COVID -19 ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေ အနေများ၊ သက်သာလျော့ပါရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်စာတမ်းရေးသားထုတ်ဝေရန်နှင့် အာဆီယံဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေငြာချက်တစ်ရပ် (Joint Statement)ကို ထုတ်ပြန်ရန် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
၎င်းအထူးအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများက COVID-19 ကြောင့် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် အကျိုးသက် ရောက်မှုများ၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးများလျော့ချနိုင်ရေးမူဝါဒများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမဟာဗျူဟာများ၊ အစီအမံများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသီးသီးတင်ပြခဲ့ကြရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အာဆီယံအရေးပေါ်အခြေအနေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အထူးအစည်းအဝေးအား Video Conferencing ဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီကျင်းပသွားရန်၊ အာဆီယံဝက်ဆိုဒ်တွင်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ ခရီးသွားအကြံပြုချက်များကို စုစည်းလွှင့်တင် သွားရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ပြည်တွင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းကို ဦးစွာမြှင့်တင်သွားရန်၊ COVID-19 ကာလအလွန်တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ အနာဂတ်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေး အတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ခရီးသွား လုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း အကြံပြု တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အထူးအစည်းအဝေးက ထုတ်ပြန်မည့် ပူးတွဲ ကြေငြာချက်ပါ COVID-19 ၏ သက်ရောက်မှုများလျော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ပူးတွဲကြေငြာချက်အရ အဓိကအားဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အောက်ပါအချက်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(၁) ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများအားလုံးအတွက် COVID -19 ဆိုင်ရာ တိကျမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေပေး ရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသောအာဆီယံခရီးသွား လုပ်ငန်းအရေးပေါ်အခြေအနေဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်
(၂) COVID-19 အပြင် အနာဂတ်တွင် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့်ကပ်ဘေးများကြောင့် အကျိုး သက်ရောက်မှုများလျှော့ချရေးအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သောဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည့်စုံ၍ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိသည့် ဆောလျင်စွာတုံ့ပြန်နိုင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် သွားရန်၊
(၃) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေများ၊
ပြန်လည် ထူထောင် ရေး ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများ၊ အတွေ့အကြုံကောင်းများနှင့် သတင်း အချက် အလက်များ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်
(၄) အာဆီယံသို့ လာရောက်လည်ပတ်မည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များအကြား ဘေးကင်း လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုမြှင့်တင်ရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူ များအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သည့်အကာအကွယ်များရရှိစေမည့် လုပ်ငန်းခွင် စံနှုန်း နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်
(၅) အာဆီယံ၏ ပေါင်းစည်းစျေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာရေး ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာအသုံးပြု၍ COVID -19 အလွန်ပြန်လည် ထူထောင် ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန်
(၆) အကြီးစား၊ အလတ်စားနှင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းငယ် များနှင့် အခြားထိခိုက်မှုရှိသောလုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာ၊ ငွေကြေး၊ အခွန် အခနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အခြေခံလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးမူဝါဒများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်
(၇) COVID -19 အလွန်ကာလအတွက် အာဆီယံကိုရေရှည်တည်တံ့၍ အားလုံးပါဝင်မှု ရှိသောခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများ အားလုံးနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
အထူးအစည်းအဝေးက အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID-19ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ သုံးသပ်အကဲဖြတ်စာတမ်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေငြာ ချက်တို့ကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၀:၃၀နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
THE Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19 was held throughavideo conference at 8:30 am yesterday morning. Cambodia assumed the chairmanship for the meeting and Indonesia assumed the vice-chairmanship.
The meeting focused on announcingajoint statement for cooperation between ASEAN tourism ministries to develop tourism in the ASEAN region and issueasurvey on mitigating negative consequences of COVID-19 on the hotel and tourism sector and rehabilitation processes.
The meeting discussed consequences of COVID-19 on the ASEAN tourism sector,apolicy on reducing negative consequences, strategies and action plans for rehabilitation. Union Minister for Hotels and Tourism U Ohn Maung discussed that the ASEAN emergency communication special meeting should be held via video conferencing, compiling ASEAN member nations, travel recommendations on the ASEAN website, to elevate domestic tourism sector to redevelop the travel sector, working together after COVID-19, and facilitating closer relations between tourism leaders of all member nations.
The Joint Statement said to elevate distributing true news on COVID-19 for travellers and travel businesses in ASEAN member nations and cooperating on emergency communication network on ASEAN tourism. It also said to cooperate with tourism related departments and organizations to reduce consequences of COVID-19 and future possible pandemics, implementing action plans for transparent preliminary response, sharing experiences and news and information, drafting standards and guidelines for ensuring better security for travellers in ASEAN member nations and other related topics. —MNA